Ganac waa qanjir weyn oo bogga hoostiisa ku yaala. Ganacu wuxuu soo saaraa saddex dheecaan oo dhiiga lagu daayo(endocrine part) oo kala ah : insolin , glucagon iyo somatostatin. waxu kalu soo daaya dhecano kale oo lagu daayo xiidmaha (exocrine part). Insolin-ta waa hormoon ama dheecaan waxaana soo saara unugyada "beeta" oo ka mid ah kuwa ganacu ka samaysan yahay. Insoliinta shaqadeedu waa burburinta sonkorta (glucose). dheecaankan marka uu ganacu soo saaro si toos ah ayaa loogu daraa dhiigga. Wixii glucose (sonkor) ahaa ee dhiigga la socdey ayuu u sahlaa iney galaan unugyada gudohooda si loo burburiyo. Xuubka unugga ayey glucoskii ka dustaa oo gudaha unugga ayey sonkortii gashaa. meeshaas iney gashona waxaa sahley insoliiinta. Insoliinta laáanteed ma suurtoobeyso iney unugyadu qaataan sonkorta dhiigga dhex wareegeysa. Insolintu waa hormoon ka dhisan 51 amino-asiidh. Waa hormoon uu ganacu soo saaro. Waa hormoon ama dheecaan ku lid ah insolinta. Dheecaankan shaqadiisu wxey ku lid tahay shaqada insoliinta. Labadan dheecaanba si toos ah ayaa dhiiga loogu daraa.
Last edited on 7 May 2015, at 18:25